Kọlịflawa na curry ude | Ntụziaka nri
Kọlịflawa na curry ude
Maria onyekwere | 13/06/2021 10:00 | Akwụkwọ nri
Remember na-echeta Ntụziaka anyị kwadebe ụnyaahụ? Nke Kọlịflawa na karọt salad na apụl Kedu ihe ọ chọrọ ka a jupụta maka sandwiches na sandwiches? Taa, anyị na-eji ọkara nke ọzọ nke kọlịflawa iji kwadebe ude dị mfe, nke dị mma iji jee nri abalị. A kọlịflawa na curry ude, na-atọ ụtọ.
Ndị na - ede akwụkwọ na ibe a amatala ihe m na - eche banyere creams: ha dị ka a nnukwu ihe eji eme nri. Ha dịkwa nnọọ mfe na ngwa ngwa ịkwadebe, n'agbanyeghị oke akụkụ ị kpebiri ịme. Kọlịflawa na curry ude anyị na-eme taa abụghị otu, gbalịa!
Ọ bụrụ na curry na-amasị gị, ude a ga-amasị gị. Ọ bụrụ na ijibeghị ihe a ejibeghị gị, agbanyeghị, ị nwere ike ịnwa ịgbakwunye ntakịrị ihe karịa ego egosiri na nhazi. Iji tinyekwuo, a ga-enwe oge! Nwere ike ijere ya ozi dịka ọ dị soro ya na umu ahihia were chara ma ọ bụ ntakịrị ihe oriri.
Kọlịflawa na curry a zuru oke iji mezue nri abalị gị kwa ụbọchị. Ude dị mfe ma dị ngwa iji kwadebe ma nwee ọtụtụ isi.
Onion yabasị ọcha
Kọlịflawa na-enweghị azuokokoosisi
⅓ teaspoon nke cumin
Iko iko akwukwo nri ofe ma obu mmiri
Iri na yabasị na galik.
Anyị na-ekpo mmanụ mmanụ n'ime ite na sauté yabasị na galik rue mgbe nke mbu bu translucent.
Mgbe ahụ anyị tinye kọlịflawa na obere florets na esi nri ruo mgbe ejighị ya kpọrọ browned.
Mgbe ah anyị na-etinye ngwa nri anyị na-agwakọta.
N'ikpeazụ, anyị na-awụpụ iko abụọ nke mmiri ma ọ bụ ofe akwukwo nri -nke kwesịrị ikpuchi akwụkwọ nri ahụ esi nri maka nkeji 10.
Mgbe minit 10, gwerie ma jee ozi, kọlịflawa na ude, na-ekpo ọkụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Inicio » Efere » Akwụkwọ nri » Kọlịflawa na curry ude
Onyinye na inine na cheese ihendori